Newgrounds ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ:အွန်လိုင်းအခမဲ့ Xxx ဂိမ္း
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳ Newgrounds ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ:နိုင်သည်အဖြစ်ဖြစ်နိုင်ပြောမှခေါင်းစဉ်၊ဤအရပ်မှလာသောအခါသင်ချင်တယ်အကိုဝင်ရောက်ဖို့နိုင်မှာအပူဆုံး XXX လွှတ်ပေးဖို့လူသိများ။ အရှည်ဆုံးအချိန်၊ကျနော်တို့စွဲရန်အမည်ပေးခြင်း၏လူအဖို့လက်လှမ်းအရည်အသွေးမြင့်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံများတဲ့ကြိမ်းမျှော်လင့်ချက်များနှင့်ခြိမ်းခြောက်ကဆင်းယူနိုင်ဖို့အကြီးမားဆုံးအမည်များအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်း။ Newgrounds ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲခဲ့၏ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းမှာဂိမ်းဖန်တီးအာကာသများအတွက်အတော်လေးအချိန်တချို့ကိုအခုကျွန်တော်တို့နိုင်စေဖို့ကိုချစ်ချင်ပါတယ်အဘယ်အရာကိုသင်ပြခဲ့ပြီးပြီတက်ကတည်းကကျွန်မတို့ပထမဆုံး incepted။, ဒါဟာစွန့်ခွာမည်မဟုတ်အများကြီးစိတ်ကူးစိတ်သန်းမှအထူးသဖြင့်ဆိုရင်နိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုအမှန်တကယ်ပျော်မွေ့နေတဲ့ကောင်းသောအပြာကားထုတ်လုပ်ရေး။ အဆိုပါဘီးမှာရွေ့လျားဘို့ Newgrounds ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲဖြစ်လာဖို့အပူဆုံးနေရာအတွက်အင်တာနက်ကိုသူမည်သူမဆိုရဲ့စိတ်အားထက်သန်ခံစားဖို့အချို့အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစားခြင်းချမ်းသာ–အလုပ်ရယ်တာလား? နေစဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်စီမံကိန္းကိုသက်သေပြဖို့ကျွန်တော်အသက်ရှင်နှင့်လူး၊နိုင်စွမ်းနှင့်အတူအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဆင့်၏အရည်အသွေး။ ကျေးဇူးပြုပြီးဖတ်ပေါ်သို့မဟုတ်အတက်လက်မှတ်ထိုးရန်အခုအချိန်မှာဘယ်အရာကိုမြင် Newgrounds ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲခဲ့ရတဲ့အထိ။ ဒီရုံ၏အစအဦးတစ်ခုခုအမှန်တကယ်မော်ကွန်း!
ကျွန်တော်တို့ကိုမမှားမရကြဘူး:ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ပဲဘယ်လောက်အရေးကောင်းဂရပ်ဖစ်များအတွက်ဖန်တီးတစ်ဦးကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်၊ဒါပေမယ့်ကပြောသည်ဘဲလျက်၊ကျနော်တို့လည်းသေချာအောင်ချင်သောအရာများလှပါတယ်လုံးဝမယုံ။ Newgrounds ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲသည်ဤသို့ကျူးလွန်ဖို့ပေးခြင်းအားလုံး၏အဆိုပါဂိမ်းကစားကိုအထွက်ရှိသုံးစွဲရန်အရာတစ်ခုခုကိုအမှန်တကယ်ထူးခြားတဲ့နှင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်:တင့်တယ်သောချည်နှောင်လျက်ရှိသောအလုပ်သင် jizz၏တစ်ဦးအမှု၌စက္ကန့်!, အပုံရိပ်တွေဒီနေရာမှာတကယ့်ဝယ်လိုအားမောင်းအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ရှိသည်:ထိုသို့ဖြစ်သင့်သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ထင်ရှားသောကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်၏အထုပ်မှကြွလာသောအခါဤကလေး၊ကျွန်မတို့ဟာသွားဖို့နှေးကွေးမည်သည့်အချိန်ကြာ! မေ့လျော့၊သင့်ရဲ့အချိန်ကိုဖြုန်းနှင့်အတူစုတ်လှပတဲ့ဂိမ်းမှအတိတ်:အထူးသဖြင့်အခါသင်ပေးနိုင်ပါသည်အ juiciest ဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံကြောင်းဒီမှာချည်နှောင်လျက်ရှိသောအလုပ်သင်အခွံမာသီးမှာပါ။ ငါတို့သည်လည်းသေချာဖန်ဆင်းတော်အားလုံးဂိမ်းကျနော်တို့ရှိသည်ကိုအပြေးနိုင်စွမ်းသူတို့၏ဂရပ်ဖစ်အပေါ်အလယ်-အဆုံးစက်၏ဖြစ်နိုင်ခြေမပါဘဲယွင်းသို့မဟုတ်အခြားသူဘာပဲ။, ငရဲ၊ပင်လူနှင့်အတူစာသားအလူးရှိသည်ဖို့အပ်သောအလွန်ကြီးစွာသောအချိန်ပျော်မွေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်များ–သူတို့မဖြစ်စေခြင်းငှါကဲ့သို့ကောင်းသောကြည့်ရှုကျနော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်၊ဒါပေမဲ့သူတို့နေဆဲအများကြီးတစ်ငရဲထက်ပိုကောင်းသင်သည်အဘယ်သို့ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
အကြီးမားဆုံးပြဿနာတွေမှကြွလာသောအခါဂိမ်းကစားပေါက်ထွက်ရှိသောပိုပြီးမကြာခဏမထက်၊သူတို့ကအမှန်တကယ်ရုန်းကန်ကယ်နှုတ်ဖို့ကောင်းတစ်ဂိမ်းအတွေ့အကြုံလူတိုင်းအတွက်။ အစိတ်အပိုင်းများအတွက်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်လျှင်သင်သာအနည်းငယ်ဂိမ်းများ၊သငျသညျအပြေး၏အန္တရာယ်ကိုမတတ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းမှဖြည့်ဆည်းအတိုင်းအကျိုးစီးပွားနှင့်အလိုဆန္ဒ။ Newgrounds ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲလိုအနက်ပြန်ဖွင့်ဘယ်လောက်၏ဒီအမျိုးအရာလုပ်လုပ်အဘယ်ကြောင့်ဟူဖြစ်ပါသည်၊ကျနော်တို့ရှိသည်အဖြစ် ၅၀+ဂိမ်းများအတွက်ရရှိနိုင်အခုအချိန်မှာအကြောင်းလုံးဝသီးသန့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာကြည့်တိုက်နှင့်ဒုတိယအ၊သူတို့ကအဖုံးအရူးအကွာအဝေး niches လိမ့်မယ်ဆိုတာပဲ။, ကျွန်တော်တို့အာရှချိန်းတွေ့ simulators၊ဘီဘီ gangbang စွန့်စား၊လိင်ကျွန်းချစ်ခြင်းမေတ္တာအောင်နှင့်အပြည့်အဝ-အပေါ်တြန္းအာကာသ။ တော်တော်များများအရာအားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းရန်အလိုနှင့်အလိုဆန္ဒများ၏ခေတ်သစ်လူသား–သင်သည်လက်ျာဘက်ခံစားရပါလိမ့်မယ်၊အိမ်မှာကဒီမှာအပေါ် Newgrounds ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲနှင့်အတူစုဆောင်းပြီ! ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကအမြဲဖွင့်ဖို့ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အကြံပြုချက်များအခြားသူများထံမှလည်း–သင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြဘယ်သို့သောအကြောင်းသင်ကြိုက်မနှစ်သက်၊ထိုအမှုအရာပိုကောင်းဖြစ်လာ။ အရာအားလုံးရဲ့အတက်လာမယ့် Millhouse အမျိုးမျိုးကစားဘူးလို့စိတ်ကိုအရပ်သို့စွန့အထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်။, ငါတို့သည်လည်းအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းဂိမ်းအသစ်လစဉ်အခြေခံပေါ်မှာကဒီမှာ၊ဒါကြောင့်သင်လွန်းဝေးကွာသောဘယ်တော့မှမတစ်ဦးထံမှလုံးဝလတ်ဆတ်သောအကြည့်အပေါ်အာကာသ!
အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုသည်ငါတို့အဘို့သရုပ်ပြဖို့ဘယ်လောက်ကြီးကျွန်တော်သည်သွားပေးရန်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ဖူးတာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ ပုံရူး၊ရူးနှင့်လုံးဝ bonkers၊ဒါပေမယ့်အမှု၏အချက်ကိုအကြောင်းသင်သည်တတ်နိုင်င့်တက်လက်မှတ်ထိုးရန် Newgrounds ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲအခုချက်ချင်းပေးဆောင်စရာမလိုဘဲ! ပါကမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်အချို့ယာယီသုံးစွဲခွင့်ကာလသို့မဟုတ် beta ကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုအဆင့်၊သို့မဟုတ်တစုံတခုကိုမျှတူ–ကျနော်တို့စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်၊ကအခမဲ့အခုအထိအပူအသေခံ၏။, ဤအမှုကိုပြုသော၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သေချာအောင်အဖြစ်အများအပြားဂိမ်းကစားတတ်နိုင်သမျှအရခံစားဖို့အ Newgrounds ညမ်းအတွေ့အကြုံနှင့်ငါ့ကိုယုံကြည်သောအခါငါဆိုသည်ကားသောအမှုအရာရဖို့တော်တော်မယုံနိုင်လောက်အောင်ဒီမှာပင်မရှိဘဲငွေပြောင်းလဲနေတဲ့။ ဘယ်လိုထောက်ပံ့နေတာတိ? ရှိပါတယ်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဝယ်ယူပါစေ၊ဒါပေမဲ့အဲဒီအသက်သက်သာ QoL နှင့်အလှကုန်ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုဘယ်အရာကိုမျှ–အတွင်း Newgrounds ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲမရဖြစ်ခွဲခြားကာအနိုင်ရမှပေးဆောင်'၊ဘာမှမသင်ဝယ်ယူပူဇော်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့အားသာချက်!, ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်အချစ်များပြသနိုင်ဖို့တတ်နိုင်ဖြစ်ခြင်းလူတိုင်းကအသီးအပွ၏အလုပ်သမားနှင့်ယုံကြည်ရှေ့ဆက်မသွား၊အားလုံးဂိမ်းများကိုအင်တာနက်အပေါ်နောက်ဆုံးတွင်အခမဲ့။ ပဲယူမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်တစ်ချက်ပင်ခေါင်းစဉ်ကြည့်ဖို့ဘယ်လိုအောင်မြင်သင်အားဖြင့်တစ်ခုခုကွာပေးခြင်းအကြောင်း–ကျနော်တို့ရှာနေဘာကိုဖွင့်မှအတုမှာ Newgrounds ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ!
အကြှနျုပျ၏နောက်ဆုံးအကြံအစည်အပေါ် Newgrounds ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ
ကြည့်မိတ်ဆွေများ:ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြောတော်တော်များများအရာအားလုံးကိုလိုအပ်သည်များ၏ခေါင်းစဉ်အပေါ်ကို Newgrounds ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲ။ သင်ဖူးအစောစေးနှင့်ဖြစ်ကောင်းအသံတော်တော်လေးမင်းကိုမယုံ၊သင်အရာသည်အဘယ်ကြောင့်ထိုအကြောင်းပြချက်သင်ရုံသွားဖြောင့်ရှေ့ဆက်နှင့်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီးနိုင်အောင်ကိုယ်အဘို့မြင်မှာ။ အထင်တယ်မှယူသောအရာကိုထိုခံစားကြည့်ပါအကောင်းဆုံးအပြစ်တင်ဖွယ်ဂိမ်းကစားလူမှုအသိုင်းအတွက်စီးပွား? ကောင်းစွာကြည့်ရှုယူနှင့်အတူပတ်ပတ်လည်သင့်ရဲ့အခမဲ့အကောင့်ကို၊အချို့ကိုကြိုးစားကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်တို့ကိုသိစေနှင့်ဟုသင်ထင်သောအရာကိုအကြောင်းကိုတပြင်လုံးကိုအတွေ့အကြုံ!, Newgrounds ရွယ်ရောက်ပြီးသူအားကစားပြိုင်ပွဲဒီမှာကိုသင်ပြမှကြွလာသောအခါညမ်းဂိမ်းကစားအွန်လိုင်း၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Newgrounds ဒေတာဘေ့စသည်သာအပြောက်စဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြယ်တစ်လျှောက်မှာလာမယ့်မေလ၏နောက်လာမည့်အစည်းအဝေး၏stroking မြွေကိုအကောင်းဆုံးကိုတဦးတည်းဖြစ်သော်လည်း!